मेस्सीसँग आजीवन सम्झौता गर्ने बार्सिलोनाको योजना ! | Hamro Khelkud
मेस्सीसँग आजीवन सम्झौता गर्ने बार्सिलोनाको योजना !
बिहीबार, कात्तिक ९, २०७४
बार्सिलोना (एजेन्सी)– बार्सिलोनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओस्कार ग्राउले क्लबले लियोन मेस्सीसँग आजीवन सम्झौता गर्न चाहेको खुलासा गरेका छन् । अर्जेन्टिनाका सुपर स्टारले जुलाईमा ४ वर्षे नयाँ सम्झौताका लागि सहमति जनाएका थिए । तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न क्लबका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउ र उनीसँगै बस्न बाँकी छ ।
बार्टोमेउले मेस्सीसँग योजना अनुसारनै छलफल गर्ने र उनी बार्सिलोनामा पछि सम्म बस्न तयार हुने अपेक्षा राखेको बताइएको छ । यो महिनाको सुरुआतमा मिडफिल्डर आन्द्रेस इनियस्टासँग गरेको आजीवन सम्झौता गरे जस्तै क्लबले ३० वर्षे मेस्सीसँग सम्झौता गर्न चाहेको बताइएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत ग्राउले खेल जीवनपछि पनि मेस्सीको भविष्य सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायका साथ आजीविन सम्झौता गर्ने प्रयास गरिएको खुलाएका छन् । ‘मेस्सीले जुनमा नयाँ ४ वर्षे सम्झौता गरेका छन् । तर क्लब उनलाई आजिवन सम्झौता गर्न चाहन्छ,’ बार्सिलोनाको शनिबार सम्पन्न साधारण सभामा ग्राउले भनेको इएसपिएनले उल्लेख गरेको छ ।
‘सानै उमेर देखि मेस्सी क्लबमा छन् । उनी यहि रहेको हेर्न चाहन्छौं किन की उनी यहाँका आदर्श हुन्’ उनले भने, ‘खेल जीवन पछि पनि उनी क्लबसँगै निरन्तर रहुन् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ मेस्सीको अहिलेको सम्झौता अर्को वर्ष सकिदैछ । क्लब मेस्सी अन्य क्लबमा नजाउन भन्नका लागि यस्तो योजना अघि सार्ने तयारी गरेको बताइएको छ । अर्जेन्टिनाका कप्तान समेत रहेका मेस्सीले यो सिजन बार्सिलोनाका लागि १२ खेलमा १४ गोल गरिसकेका छन् ।